Lany ho filohan’ny oniversiten’I mahajanga ny profesora Rakotoarivony Emmanuel. Hitantana ny oniversite mandritra ny telo taona misesy ity profesora ity. Marihina fa nandray anjara tamin’ny fifidianana ireo mpandraharahan’ny oniversite sy ny mpampianatra raikitra rehetra.
Mbola betsaka ny asa miandry ity filoha vaovao ity amin’ny fandaminana ny disadisa niseholany tao amin’ny oniversiten’i Mahajanga. Namoizana ain’olona mihitsy tao amin’ny oniversite tamin’ny taon-dasa. Ho an’ny eto Antananarivo, hotanterahina amin’ny alatsinainy izao ny fifidianana izay ho filohan’ny oniversite vaovao. Olona mahavita mamaha hatrany ny fitokonan’ny mpianatra sy ny mpampianatra izay tsy mbola tena ahitana vahaolana no andrasan’ny maro.
Mahazaka olona hatrany amin’ny 45.000 ny tranolay efa nomanin’ny BNGRC ho an’ireo traboina eto Antananarivo rehefa ho avy ny fiakaran’ny rano. Mitsinjara isaky ny boriborintany izany tranolay izany.
Nitsidika ireo toerana maromaro handraisana traboina ireo ny minisitera tompon’andraikitra sy ny kaominina Antananarivo ary ny BNGRC, tamin’ity herinandro ity. Nisy ny dinika niarahana tamin’ny lehiben’ny fokontany sy ny delegen’ny boriborintany ka nanapahana fa tokony hisy ny foibe goavana, toy ny teny Andohatapenaka handraisana ny traboina.
Hatao izany hanamorana ny fitantanana ny fanampiana ireo traboina ireo. Na izany aza, ilaina ihany koa ny fanomanana toerana akaiky hamindrana vonjimaika ireo traboina. Tsy lavitra ny sekolin’ny mpianatra sy ny trano fonenana ary ny toeram-piasana.